Inethiwekhi ye-Apple's Search manje iyahambisana nezinsiza ezivela eceleni | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | 07/04/2021 20:08 | Izesekeli ze-IPhone, eziningana
U-Apple usanda kumemezela emaphephandabeni inethiwekhi entsha yokuSesha ehambisana nezinsiza zomuntu wesithathu, futhi abakhiqizi bokuqala sebevele bamemezele amadivayisi abo ahambisanayo ngesonto elizayo.
Uhlelo lokusebenza le-Search belusiza ukubuyisa ama-iPhones alahlekile iminyaka, futhi kancane kancane beluthola ukusebenza okusha namadivayisi ahambisanayo, kepha njalo ngaphakathi kohlelo lwe-Apple. Manje ngezinsiza ezintsha ezivela eceleni amandla ale nethiwekhi yokuSesha andisiwe.
Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi, amakhasimende ethu ethembele ku-Find My ukuthola amadivayisi wabo we-Apple alahlekile noma antshontshiwe, konke lokhu kuvikela ubumfihlo babo. Manje siletha amakhono okusesha anamandla we-Find My, enye yezinsizakalo zethu ezithandwa kakhulu, kubantu abaningi abanohlelo lwezinto zokuthola inethiwekhi yami. Kuyasijabulisa ukubona ukuthi uBelkin, uChipolo, noVanMoof babusebenzisa kanjani lobu buchwepheshe, futhi asikwazi ukulinda ukubona ukuthi abanye ozakwethu benzani.
Lolu hlelo olusha lwabakhiqizi abavela eceleni luzoba yingxenye ye- "Made for iPhone" (MFi). Yonke imikhiqizo kufanele ihambisane nezinyathelo zokuphepha ze-Apple nezimo zazo zobumfihlo. Lezi zinto eziqinisekisiwe ze-MFi zingangezwa kusuka kuthebhu "Izinto". futhi bazoba nebheji eqinisekisa ukuhambisana kwabo. Lawa madivayisi azokwazi ukusebenzisa i-chip ye-U1 ye-Apple, ukuze indawo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Search inembe kakhudlwana.
Amabhayisikili kagesi we-S3 wakamuva kanye neX3 kusuka Vanmoof, i-SOUNDFORM Freedom True headphones engenantambo evela Belkin nesitholi sendatshana I-Chipolo I-ONE Spot izoba ngamadivayisi okuqala okusekela le nethiwekhi entsha yokucinga evela eceleni. U-Apple ukuqinisekisile ukuthi kuzoba nabakhiqizi abasha abazojoyina inethiwekhi ye-Search. Le nethiwekhi izokwakhiwa yizigidi zamadivayisi we-Apple azosiza ekutholeni la madivayisi ahambisanayo ngokungaziwa nangokusebenzisana, noma ngabe i-iPhone yedizayini ikude ngamamayela. Ubumfihlo balesi simiso buqinisekiswa ngokubethela kokuphela kokuphela, ukuze i-Apple noma umenzi wayo angakwazi ukwazi indawo yamadivayisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Izesekeli ze-IPhone » Inethiwekhi ye-Apple's Find manje iyahambisana nezinsiza ezivela eceleni
UDaniel P. kusho
kwenza Izinsuku ze-2
Uma inethiwekhi ye-Search izoncika ku-U1 Chip, ngiyakuqonda ukubambezeleka kwalabo abavela e-Cupertino ukwethula ama-Airtags futhi ngaleyo ndlela nginike isikhathi sokuba khona kwamadivayisi (i-iPhone 11 ne-12 nakho konke okuhlukile) ukuze bakwazi ukuthola abathungathi. Ekugcineni kuzofana ne-Samsung… angikuboni kusiza kakhulu namhlanje.
Phendula uDaniel P.